ठगीको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ भाद्र २०७६, आईतवार १५:३७ लेखक Sabita Roka
कैलाली । उपहारको प्रलोभन देखाएर कुपनमार्फत सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले भारतीय नागरिकको एउटा समूहलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा उत्तरप्रदेशको बहराइच पचागपुर तहसिलका २५ वर्षीय शैलेश त्रिपाठी, २९ वर्षीय निरञ्जन सिंह, २४ वर्षीय नरपती सिंह, २३ वर्षीय आशिष सिंह, ३० वर्षीय विन्देश्वरी सिंह र ३९ वर्षीय पंकज कुमार सिंह छन् ।
उनीहरुलाई कैलाली सदरमुकाम धनगढीबाट ४३ हजार रुपैयाँ नगद, स्क्रयाच नगरिएका कुपन ७१०, स्क्रयाच गरिएका ४ र ३ वटा मोबाइलसहित पक्राउ गरिएको हो ।
कैलाली प्रहरी प्रमुख एसपी सुदीप गिरीका अनुसार यो समूहले १० दिनदेखि धनगढी बजार क्षेत्रमा उपहारको प्रलोभन देखाएर सय रुपैयाँको कुपन किन्न लगाएर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएको थियो ।
सय रुपैयाँको कुपन किन्ने हरेक व्यक्तिलाई उपहार पर्ने र केही उपहार नपर्ने व्यक्तिलाई दुई सय रुपैयाँ दिने उनीहरुले बताउने गरेका थिए । उपहार नपरे पनि दुई सय रुपैयाँ पाइने लोभले सर्वसाधारणले उनीहरुको कुपन खरिद गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुपन खरिद गर्दा उपहारमा ५१ इञ्चको एलसीडी टीभी, ल्यापटप, मोबाइल, स्वीच मेसिन, ग्यास चुल्हो पर्ने प्रलोभन दिँदै आएका थिए । तर, उपहार परेका व्यक्तिले चार हजार पाँच सय रुपैयाँ दिनुपर्ने उनीहरुको नियम थियो । त्यति रकम तिरेपछि एक महिनाभित्र उपहार उपलब्ध गराउने बताएर उनीहरुले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाइरहेको एसपी गिरीले बताए ।
कुपन बेचेर मोटो रकम संकलन गरी उनीहरुले भारततिर भाग्ने योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शान्ति सेनाको कोटा संख्या बढ्ने
काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहमा थप शान्ति सैनिक खटाउन तयार भएको बताएका छन् ।
काठमाडौ । पदअनुरुपको आचरण नगरे विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई तत्काल हटाउने गरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री…
नायिका वर्षा राउत नेपालका अघोषित वेश्यालयभित्र यौनकर्ममा लिप्त ! छोएमात्रपनि चार्ज
काठमाडाैं । चर्चित नायिका बर्षा राउत वेश्यालयभित्र यौन कर्ममा लिप्त भएको अवस्थामा फेला पर्छिन् । उनी त्यहाँ पुरुषले छोएको…
काठमाडौं । जो अगुवा उही … भने जस्तै छ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष मोहन विष्टको व्यवहार…
हाँस्नुका पाँच फाइदा
हाँस्दा तनाव कम हुन्छ । साथै करिब ४५ मिनेटका लागि…